VA - Bo Bo Music Production 3rd Year Records [2013 Album] [Disc - 1] - Mg Shan Lay
Home Album Bobby Soxer Various Artists ရဲရင့်အောင် ကြိုးကြာ သားစိုး သားကြီး ဝေလ ဂေဂေး VA - Bo Bo Music Production 3rd Year Records [2013 Album] [Disc - 1]
VA - Bo Bo Music Production 3rd Year Records [2013 Album] [Disc - 1]
12:27:00 PM Album, Bobby Soxer, Various Artists, ရဲရင့်အောင်, ကြိုးကြာ, သားစိုး, သားကြီး, ဝေလ, ဂေဂေး,
1. နေနိုင်လို့လား - ရဲရင့်အောင်
2. အနီးဆုံးလူ - ၀န
3. ပွဲ - Bobby Soxer
4. The Only One I Care ! - KgHT
5. ချစ်သူလမ်းပြကြယ် - ® 1 Roll 1
6. ရွှေဧည့်သည် - ဝေလ
7. နောင်တ - Player K & Irine
8. မင်းရဲ့အဝေး - Ixora
9. မျှော်လင့်ရင်း - သားစိုး(G3) ၊ ၀ိုင်းလေး
10. အမုန်းကမ္ဘာမှနေ့စွဲများ - G-Fatt & စုနန္ဒာအောင် (Supermodels)
11. မျှော်လင့်သောအချစ် - ကြည်သာဌေးလွင်
12. Lollipop - ကိုဆက် ၊ ကောင်းဆက် (YGN) ၊ သူရိန်
13. လှည့်ကွက် -3Creators
14. အတူရှိချင်တယ် - မှုံကြီး ၊ ခင်နန်းထိုက်စံ
15. Aunty သမီး - သားကြီး
16. ချစ်သူသို့ - ဘချစ် ၊ ကြိုးကြာ
17. အချစ်မရှိလဲ - ဥာဏ်ထက်
18. နောင်တကဗျာ - ဂေးဂေး
19. မင်းမရှိတဲ့ငါ့ကမ္ဘာ - Moe Z ၊ ရဲသူ (H Town)
Tags # Album # Bobby Soxer # Various Artists # ရဲရင့်အောင် # ကြိုးကြာ # သားစိုး # သားကြီး # ဝေလ # ဂေဂေး
Labels: Album, Bobby Soxer, Various Artists, ရဲရင့်အောင်, ကြိုးကြာ, သားစိုး, သားကြီး, ဝေလ, ဂေဂေး